Mpamatsy fividianana fantsona voajanahary sy mpiorina finday mora vidy | YiZheng
Inona no ilana ny Conveyor Belt Mobile Portable?
Azo entina Mobile Belt Conveyor dia azo ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny simika, arina, mine, departemanta elektrika, indostria maivana, varimbazaha, sampana fitaterana sns. Mety amin'ny fampitana fitaovana isan-karazany amin'ny granular na vovoka. Ny hakitroky betsaka indrindra dia tokony ho 0,5 ~ 2.5t / m3. Azo ampiasaina amin'ny fampitana kitapo na baoritra feno entana ihany koa izy io.
Endri-javatra an'ny Portable Mobile Belt Conveyor
(1) Misy 5 metatra, 8 metatra, 10 metatra, 12 metatra, 15 metatra, 18 metatra, 20 metatra ary famaritana hafa.
(2) Ny sakan'ny fehikibo dia mety ho 500mm, 600mm, 650mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm ....
(3) Ny hatevin'ny fehikibo dia mety ho 8mm, 10mm, 12mm, 14mm ..... Ampiasao ny fehikibo EP fehikibo avo lenta.
(4) Ny vatan'ny vy vy mahery.
(5) Ny haingam-pandeha dia azo fehezina amin'ny 0.3m / s-2.5m / s, ny mpampita fehikibo finday dia afaka mifehy ny hafainganam-pandeha hihaona amin'ny fepetra takiana amin'ny fitaterana sy ny fonosana.
(6) Ny haavony dia azo ovaina amin'ny motera miakatra sy midina, tena mora ampiasaina.
Ny milina rehetra dia haingoina amin'ny alàlan'ny tena takiana.
Fampisehoana horonantsary amin'ny fehikibo finday azo alefa
Safidy maodely voafintina amin'ny fehikibo finday
Teo aloha: Milina fehikibo fehikibo
Manaraka: Mpampita ny fehikibo mahitsy mitsivalana mitsivalana